Exif Viewer, yemahara kwenguva shoma | IPhone nhau
Zvekare zvakare tinodzokera kumutoro kuti tikutaurire nezve mhando yemhando, iko kunyorera kwatinogona kurodha mahara kwenguva yakati rebei. Nezuro ndakakuzivisa nezve mukana wekurodha pasi ACDSee Pro, chishandiso chine mutengo wenguva dzose muApp Store ye6,99 eurosque inotibvumidza kutora uye kugadzirisa mapikicha, uye kuti kwenguva shoma inogona kutorwa pasi zvachose mahara. Nhasi chijana che Exif Viewer, chimwe chikumbiro chine chekuita nekutora mifananidzo iyo ine mutengo wenguva dzose we2,99 euros muApp Store, asi kwenguva yakati wandei inogona kutorwa pasi mahara.
Exif dhata iri iyo technical data yezvatinotora,, data inotibvumidza kuti tikurumidze kuziva aperture yakashandiswa, the sensitivity, the focal length, its equal in 35 mm, if we have used a flash or not, the date and time they were taken, the shutter speed, at altitude, the GPS data (kana kamera iinawo kana isina kuitwa ne smartphone), mhando yekamera uye modhi, pamwe neiyo mhando uye mhando ye lens inoshandiswa….
Sekuona kwedu, chishandiso ichi hachina kungotarisirwa kune zvatakatora needu smartphone, asi inotipa ruzivo rwakadzama rwechero mufananidzo unochengetedza iyi data, data iyo inowanzorasika kana iyo fomati fomati yashandurwa, saizi yakadzikiswa, inogoverwa nemasocial network kana mameseji maficha.
Iri svondo inotibvumidza kudzima iyi data kana isu tichida kugovera kutora kuburikidza neimwe nzira, semuenzaniso AirdDrop, kuburikidza iyo iyo data isina kurasika. Izvo zvinotibvumidzawo isu kuronga edu mafoto pamepu zvinoenderana nekwavakatorwa. Exif Viewer inotsigira 3D Kubata tekinoroji uye iyo Peek & Pop mashandiro.Inoda inokwana iOS 8 kana yepamusoro uye inoenderana neiyo iPhone, iPad uye iPod touch.
EXIF Viewer naFluntro3,49 €
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Exif Viewer, yemahara kwenguva shoma
Ko USB-C inozopedzisira yasvika kumadivosi eOS?